सबैका लागि कार्यक्रम - डा। अडेम
तिमीलाई क्यान्सर उपचार चाहिन्छ?
- विज्ञानमा आधारित
- राम्रोसँग सहन गरिएको
तपाईंले आफ्नो पारम्परिक उपचार समाप्त गर्नुभयो?
तपाईंको अ organs्ग र तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली पुनःप्राप्त गर्नुहोस्
तपाईं हाल एक परम्परागत चिकित्सा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ?
बाँच्नको लागि तपाइँको मौका बढाउनुहोस्
तपाईं आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली पुनर्स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ?
तपाईंको प्राकृतिक ढाल बनाउनुहोस्
तपाई विज्ञान आधारित वैकल्पिक थेरापीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ
परम्परागत क्यान्सर उपचारको लागि मुख्य उपचार विकल्प दशकहरूमा परिवर्तन भएको छैन। शल्य चिकित्सा, केमोथेरापी र विकिरण अझै पनि मुख्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ। एन्टिबडी र इम्यूनोथेरापीहरू अझै परीक्षण चरणमा छन् वा केवल अतिरिक्त उपचार विकल्पको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
उपचारको ध्यान क्यान्सर कोषहरूको अधिकतम विनाशमा केन्द्रित छ प्रतिरक्षा प्रणाली र जीवनको गुणस्तरको पर्याप्त विचार नगरी।
यो ठीक त्यहि हो जहाँ तपाइँ यी उपचारहरूको प्रमुख नकारात्मक पक्ष पाउनुहुनेछ। तिनीहरूको साइड इफेक्ट बिरामीहरूका लागि अत्यन्त कष्टकर छन्। केमोथेरापी र विकिरणले विशेष गरी रोग प्रतिरोध क्षमता र अ organs्गहरूलाई बिगार्छ कि बिरामीको जीवनस्तर प्रायः यस बिन्दुमा सम्झिन्छ कि अर्को उपचार सम्भव छैन।
अर्को समस्या क्यान्सर कोषहरूको अनुकूलता हो। धेरै जसो उनीहरू पहिलेका उपचारका कारण यति प्रतिरोधी भएछन् कि अतिरिक्त क्लासिक उपचारहरू पर्याप्त प्रभावकारी हुँदैनन्।
यो सबै बिरामीहरूका लागि गाह्रो अवस्था हो। तिनीहरू पक्कै पनि हार दिन चाहँदैनन्, तर अर्को तर्फ, तिनीहरू अनावश्यक रूपमा उनीहरूको शरीरलाई हानी गर्न चाहँदैनन्।
यो जहाँ हामी तपाईंलाई एक विकल्प प्रस्ताव गर्न सक्छौं। मेरो प्रोग्राममा उत्तम उपचारहरू समावेश छन् जुन तपाईं विश्वव्यापी फेला पार्न सक्नुहुनेछ जब यो पूरक र वैकल्पिक क्यान्सर औषधिको कुरा आउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सीय अवधारणाहरूलाई एउटा अद्वितीय उपचार योजनामा ​​समाहित गरियो। सबै उपचारहरू कोमल र राम्रो-सहिष्णु छन्, तर एकै समयमा धेरै प्रभावकारी। तिनीहरू कडा वैज्ञानिक मापदण्डहरूको पालना गर्छन् र बिरामी मार्फत बिरामीहरूद्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको छ।
क्यान्सर सेलहरू नष्ट गर्नु बाहेक, हामी प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्न, जीवनको गुणस्तर र अंग समारोह कायम राख्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। हामी विश्वास गर्छौं कि क्यान्सर उपचार मात्र सफल हुन सक्दछ जब यसले यी सबै कारकाहरूलाई विचारमा राख्दछ।
हाम्रो उपचारले पनि मद्दत गर्न सक्दछ जब परम्परागत उपचार अब प्रभावकारी हुँदैन वा साइड इफेक्टको कारण अब उप्रान्त प्रयोग गरिदैन। तिनीहरू बिरामीहरूका लागि पनि हुन्, जो एक वैकल्पिकको साथ साथ वैज्ञानिक रूपमा ध्वनि मार्ग लिन चाहन्छ।
तपाईंले आफ्नो पारम्परिक थेरापी समाप्त गर्नुभयो
दुर्भाग्यवस, धेरै जसो क्यान्सर एक निश्चित समय पछि पुन: दोहोरिन्छन्। यसको कारण यो हो कि कुनै पनि उपचारले सबै क्यान्सर कोषहरूको विनाशको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। जे होस् बिरामीलाई उपचार सफल भएको र तिनीहरु निको भएको विश्वास दिलाईएको छ, यसको मतलब यो खतरा समाप्त भएको छैन।
आधुनिक इमेजि techniques टेक्निकहरू जस्तै सीटी, एमआरआई वा पीईटी स्क्यानले निश्चित आकारभन्दा माथी मात्र ट्यूमर पत्ता लगाउन सक्छ। केवल केही मिलिमिटर साइजको सानो ट्यूमर पत्ता लगाउन सकिएन तर यसले करोडौं क्यान्सर कोषहरू समावेश गर्दछ जुन शरीरमा फैलिन सक्छ र नयाँ क्यान्सर केन्द्र बनाउँछ।
यसको बिरूद्ध सबै भन्दा राम्रो सुरक्षा भनेको क्यान्सर-प्रवर्धन गर्ने सबै ब्यवहार रोक्न र एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो। एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली धेरै प्रभावी ढंगले काम गर्दछ र पत्ता लगाउन र नयाँ विकास भइरहेको क्यान्सर कोषहरू मार्न सक्षम छ।
दुःखको कुरा, परम्परागत क्यान्सर उपचारको प्रतिरक्षा प्रणालीमा विनाशकारी प्रभावहरू छन्। प्रतिरक्षा प्रणाली, जो पहिले नै चिकित्सा भन्दा पहिले नै कमजोर अवस्थामा छ, पछि पनि कमजोर अवस्थामा छ। त्यस्तै रूपमा, हामी स्वस्थ अंगहरूलाई प्रमोट गर्ने र प्रतिरक्षा प्रणालीको पुनर्निर्माण गर्ने देखभाल कार्यक्रमहरूको लागि वकिल हो।
तपाईं हाल एक परम्परागत चिकित्सा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ
परम्परागत उपचारको सफलता दरहरू, जस्तै केमोथेरापी र रेडिएसन असंतोषजनक छन्।
तिनीहरूले धेरै स्तरहरूमा समस्या निम्त्याउँछन्:
तिनीहरूले केवल क्यान्सर कोषहरू मात्र स्वस्थ कोषहरू मार्दैनन्। यसले अंग क्षति निम्त्याउँछ। महत्त्वपूर्ण अंगहरू जस्तै मस्तिष्क, मुटु, कलेजो, र किडनी तिनीहरूको कार्यहरू गर्न उनीहरूको क्षमतामा सीमित छन्। शारीरिक कमजोरी र कहिलेकाँही स्थायी क्षति पनि नतिजा हो।
ट्यूमरमा बिभिन्न क्यान्सर कोषहरू समावेश हुन्छन्, जसको प्रत्येकमा फरक गुणहरू हुन्छन्। परम्परागत उपचारले मुख्यतया कमजोर (संवेदनशील) क्यान्सर कोषहरूलाई मार्दछ र मजबूत (प्रतिरोधी) कोषहरूलाई बाँच्न अनुमति दिन्छ। पछि उपचार पछि चाँडै गुणा गर्दछ, जसको अर्थ केमोथेरापीको प्रभावकारिता प्रत्येक अनुप्रयोगको साथ घट्छ।
नयाँ क्यान्सर कोषहरू बिरुद्ध सबै भन्दा राम्रो सुरक्षा हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली हो। यो केमोथेरापी वा रेडियोथेरापीद्वारा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर छ। उपचार पछि, एक बिरामी लगभग शून्य प्रभावकारी सुरक्षा संग छोडिन्छ।
उपचारको साइड इफेक्टले भूख हानी निम्त्याउँछ, जसले फलस्वरूप वजन घटाउँछ र शरीरको अर्को कमजोर बनाउँछ। बिरामीको जीवनको गुणवत्ता द्रुत रूपमा कम हुन्छ।
यी सबैको प्रकाशमा हामीले कार्यक्रमहरू विकास गरेका छौं जसले लक्षित तरिकामा केमोथेरापी र रेडिएसन थेरापीहरूको कार्य बढाउँछन् र उनीहरूका साइड इफेक्टहरूलाई कम गर्छन्। हामी बुझ्दछौं कि कसरी प्रतिरोधात्मक क्यान्सर कोषहरू लाई पुन: संवेदनशील बनाउने र कसरी स्वस्थ कोशिकालाई उपचारले हुने नोक्सानबाट बचाउने।
कार्यक्रमहरू जर्मनी, अस्ट्रिया र थाइल्यान्डमा १ research बर्षको अनुसन्धान र अनुप्रयोगको नतीजा हुन् र जर्मन र अमेरिकी चिकित्सकहरू द्वारा विकसित गरिएको थियो।
तपाईं आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बहाल गर्न चाहनुहुन्छ
कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीको अर्थ यो हो कि हामी रोगजनकलाई प्रभावकारी रूपमा वार्ड गर्न सक्दैनौं र त्यसैले विशेष गरी संक्रमणको लागि अतिसंवेदनशील हुन्छौं। हामी अक्सर थकित महसुस गर्दछौं, मौसम मुनि र ऊर्जा र ड्राइभको अभावमा। यहाँसम्म कि एकाग्रता विकारहरू प्रतिरक्षाको अभिव्यक्ति हुन सक्छ।
हामी यस्तो वातावरणमा बस्छौं जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो किनभने हाम्रो खाना र हाम्रो जीवनशैलीले प्राय जसो शरीरको आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन। औसत १०० खरब कोशिकाको साथ, यो प्रत्येक दिन बिभिन्न आक्रमणमा पर्दछ। यी प्रत्येक १०० खरब कोशाहरूको रक्षा र पुन: प्राप्तिको लागि आफ्नै संयन्त्रहरू छन्। एक पटक यी संयन्त्रहरू नष्ट भएपछि, सेल नष्ट हुन्छ र नयाँहरू द्वारा प्रतिस्थापन गरिन्छ।
यद्यपि यो प्रक्रिया त्रुटिमा अति संवेदनशील हुन्छ र केहि केसहरूमा असामान्य कोशिकालाई जन्म दिन्छ जुन पछि क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ।
हामी जन्मेको दिनदेखि प्रत्येक व्यक्तिको क्यान्सर सेल्सहरू हुन्छन् जुन प्रति दिन प्रतिरक्षा प्रणालीले पत्ता लगाउँदछ र नष्ट गर्दछ। यदि प्रतिरक्षा प्रणालीलाई विभिन्न कारकहरूद्वारा कमजोर पारिएको छ भने, यसले आफ्नो सुरक्षात्मक कार्य प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्न सक्दैन, र क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगहरूको परिणाम दिन सक्छ।
यी सबैको प्रकाशमा, सबै समयमा एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली कायम गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो प्रतिरक्षा निर्माण कार्यक्रम १ 15 बर्ष भन्दा बढी अवधिमा विकसित गरिएको थियो र यस सम्बन्धमा बिरामीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ।